ललितपुरमा कांग्रेस अधिवेशनः चित्रकार र श्रेष्ठमा कस्ले मार्लान बाजी ? – Mission Khabar
ललितपुरमा कांग्रेस अधिवेशनः चित्रकार र श्रेष्ठमा कस्ले मार्लान बाजी ?
मिसन खबर १० मंसिर २०७८, शुक्रबार १४:३७
ललितपुर । नेपाली कांग्रेस ललितपुरको जिल्ला अधिवेशन आजबाट शुरु हुँदैछ । जावलाखेल स्थित स्टाफ कलेजमा महामन्त्री प्रकाश शरणले १४ औँ अधिवेशन उद्घाटन गरेको निर्वाचन संयोजक लोक खड्काले जानकारी दिए । आजै बन्दसत्र प्रारम्भ भएपनि निर्वाचनको कार्यक्रम भोली राखिएको छ । ‘आज उम्मेदवारी दर्तादेखि अन्तिम नामावली प्रकाशनको कार्यक्रम हुन्छ । निर्वाचन भने भोली हुनेछ ।’ खड्काले भने
रामकृष्ण चित्रकारले छुट्टै प्यानल बनाएका छन् भने जितेन्द्र कुमार श्रेष्ठ र मीनकृष्ण महर्जनको प्यानलबीच समझदारी जुटेको छ । जिल्ला अधिवेशनमा सभापति हुनका लागि कुलमतको ५१ प्रतिशत ल्याउनु पर्ने भएकोले सभापतिका ३ जना उम्मेदवार हुँदा पहिलो चरणमा कसैले पनि ५१ प्रतिशत पु¥याउन सक्ने देखिदैन । मीनकृष्ण महर्जन र जितेन्द्र बीच दोस्रो चरणाका लागि बढि मत ल्याउनेलाई सहयोग गर्ने समझदारी भएको पाइएको छ । यता, चित्रकारलाई कांग्रेसका सभापति मदनबहादुर अमात्य, पूर्वसांसद चन्द्र महर्जन, ललितपुर महानगरका मेयर चिरिबाबु महर्जन, गोदावरी नगरपालिकाका मेयर गजेन्द्र महर्जन लगायतका नेताको समर्थन रहेको छ ।
जितेन्द्र र मीनकृष्ण प्यानलबाट सभापति बाहेकका सबै पदाधिकारी सहितका कार्यसमिति सदस्यहरुमा संयुक्त रुपमै उम्मेदवारी घोषणा गरिएको भएपनि सभापतिमा अहिलेसम्म दुवैको दावी छ । दुबैले संयुक्त प्यानल बनाएर घोषणा गरेपनि जितेन्द्रले पहिलो चरणको निर्वाचनमा बढी मत ल्याउने एक प्रतिनिधिलाई साथ दिने बताए । प्रतिनिधिका अगाडि मीनकृष्णको प्रचार मात्र बढी छ । तर आम मतदाताको मन जित्नगाह्रो छ । कांग्रेसको राजनीतिमा होमिएका मीनकृष्ण प्रहरीको सूचिमा गुण्डा नाइकेका रुपमा अझ पनि परिचित छन् ।
ललितपुर कांग्रेसमा सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षबीच नै विभाजन देखिएको छ । ललितपुरमा देउवा पक्ष ३ समूहमा छिन्न भिन्न छ । वडा, पालिका, प्रदेश र प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय अधिवेशनमा देउवा समूहका मदनबहादुर अमात्य, उदयशमशेर राणा, प्रकाशनन्दन जोशी, जितजंग बस्नेत, कर्मा व्यञ्जनकार, नवराज महत नै तीन तिर बाँडिएका छन् । चित्रकारको टीममा उपसभापतिका रुपमा खोमप्रसाद घिमिरे र गजेन्द्र महर्जनले उम्मेदवारी घोषणा भएको छ ।
यता, राणा लगायतका नेताहरूले मीनकृष्णलाई सभापतिमा समर्थन गर्ने भएका छन् । ललितपुर कांग्रेस सभापतिका लागि जितेन्द्र कुमार श्रेष्ठले छुट्टै प्यानल बनाउने तयारी गरेका छन् । प्रकाशमान सिंह निकट श्रेष्ठलाई प्रकाश नन्दन जोशी, जितजंग बस्नेत, कर्मा व्यञ्जनकार लगायतको समर्थन छ । केन्द्रमा भने अमात्य र राणा दुवै देउवा पक्षमा खुलेका छन् ।